राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि टाउको दुःखाई बन्दै रेन्समवेयर - Tech News Nepal Tech News Nepal
आईतवार, बैशाख १९, २०७८ १५:५४
राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि टाउको दुःखाई बन्दै रेन्समवेयर
काठमाडौं । रेन्समवेयर अहिलेको विश्वकै टाउको दु:खाईको विषय हो । यस्तो किसिमको विध्वंसात्मक माल्वेयर अभियान चलाउने साइबर अपराधीविरुद्ध लड्न र सम्भावित हमलाबाट बच्न आजको समयमा एकल होइन विश्वव्यापी सहकार्यकाे आवश्यकता छ ।
इन्स्टिच्युट फर सेक्युरिटी एण्ड टेक्नोलोजी (आईएसटी) अन्तर्गत रेन्समवेयर टास्क फोर्स (आरटीएफ) ले सार्वजनिक गरेको एउटा पेपरमा रेन्समवेयर र यसले व्यवसाय, समाज र सिङ्गो विश्वलाई पुर्‍याउनसक्ने खतरालाई रोक्न ४८ बुँदे सुझावहरु दिइएकाे छ ।
उक्त रेन्समवेयर टास्क फोर्समा साइबर सुरक्षा कम्पनी, सरकारी निकाय, कानूनी अभियोजन संस्था, प्राविधिक कम्पनी, शैक्षिक संस्था तथा अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थिति थियो ।
उक्त समूहमा माइक्रोसफ्ट, पालो अल्टो नेटवर्क, द ग्लोबल साइबर अलायन्स, फायरआई, क्राउड स्ट्राइक, अमेरिकी न्याय मन्त्रालय, युरोपोली तथा बेलायतको राष्ट्रिय अपराध एजेन्सीको सहभागिता थियो ।
कतिपय समाधानका सुझावमा सरकारले रेन्समवेयरबाट प्रभावित संस्थाहरुका लागि सहयोगी हात अघि बढाएर साइबर सुरक्षाको सहयोग प्रदान गर्नु पर्ने उल्लेख थिए ।
कतिपयले भने रेन्समवेयर ग्याङकै पूर्वाधारमा नै प्रत्यक्ष हमला गरी त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध लडाईं गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । जसमा साइबर अपराधीहरुले अज्ञात रहर फिरौती रकम माग्ने बिटक्वाइन तथा क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता माध्यममाथि पनि नियमन गर्नुपर्ने सुझाव थियो ।
अधिकांश अवस्थामा संगठनहरु तब मात्र साइबर अट्याक भएको जानकारी पाउँछन्, जब उनीहरुको नेटवर्कभरीको मसिनको स्क्रिनमा फिरौतीको लागि नोट पठाइन्छ । यस्तो बेला नेटवर्कलाई पुनर्स्थापित गर्न पीडितहरुसँग फिरौती रकम तिर्नबाहेक अन्य विकल्प नै हुँदैनन् । जुन लाखौं करोडौं डलरमा हिसाब हुन्छ ।
रेन्समवेयरको प्रचलन सुरु भएको धेरै वर्ष बितिसक्यो । यस अवधिमा साइबर अपराधीहरु थप चलाक र परिस्कृत ढंगबाट अपराधलाई सम्पन्न गर्न सक्षम भइसकेका छन् । उनीहरु कम्पनीको डेटालाई इनक्रिप्ट गरेर लग गरिदिन मात्र होइन । तीन संवेदनशील डेटालाई कम्प्रोमाइज्ड नेटवर्कबाट निकालेर बाहिर बेच्ने वा सार्वजनिक गरिदिने सम्मका धम्की दिन्छन् ।
यस्तो काम कुनै अत्याधुनिक आपराधिक ग्याङले मात्र गर्दैन । आजको समयमा डार्क वेबभित्रका अण्डरग्राउण्ड फोरमहरुलाई नोभिगेट गर्नसक्ने हरेक सिपालुले ‘रेन्समवेयर एज अ सर्भिस’ को रुपमा यस्ता आपराधिक क्रियाकलापलाई फत्ते गरिरहेका छन् ।
उनीहरु रेन्समवेयरको कौशललाई गिरफ्तार कसैले गर्न सक्दैन भनेर सुरक्षित धन्दाको रुपमा चलाइरहेका छन् ।
समाज प्रविधिसँग समिश्रण भइरुहेको अवस्थामा मानिसहरुले धेरै अप्रत्याशित अप्ठ्याराहरु बहन गर्नुपर्ने आईएसटीका सीईओ तथा आरटीएफका कार्यकारी निर्देशक फिलिप रेइनर बताउँछन् ।
–जेडडी नेटबाट ।
तपाईंको पुरानो फोन नम्बर कहाँ छ ? त्यसैबाट यसरी हुनसक्छ ह्याकिङ
काठमाडौं । तपाईंको कुनै पुरानो नम्बर बन्द भएको छ र तपाईं ढुक्कसँग बसिरहनु भएको छ
अमेरिकाको इन्धन पाइपलाइनमा र्‍यानसमवेयर आक्रमण, सरकारले गर्‍यो आपतकाल घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकाको प्रमुख इन्धन पाइपलाइनमा र्‍यान्समवेयर आक्रमण भएको छ । कोलोनियल पाइपलाइनमा भएको यो
अब जिमेलमा स्वतः ‘टु स्टेप भेरिफिकेसन’, तपाईंलाई के फरक पार्छ ?
काठमाडौं । तपाईंले केही दिन अघिको विश्व पासवर्ड दिवस बिर्सिसक्नु भयो होला । यदि तपाईंलाई
ह्याकरलाई डिप्रेसन, छुटकारा पाउने कसरी ?
प्रशान्त पाण्डे/-एउटा सेक्युरिटीलाई ब्रेक गरेको भरमा ह्याकरले कति धेरै डलर कमाइरहेका हुन्छन्, ,जुन साँच्चै नै